MACLUUMAADKA SAWIRADA IYO SAWIRADA DOBERMAN SHEPHERD DOG DOG - EEYAHA
Macluumaadka Sawirada iyo Sawirada Doberman Shepherd Dog Dog
Qaahira Doberman Shepherd mix ey ey
Doberman Shepherd ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Doberman Pinscher iyo Adhijirka Jarmalka . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Ella the Doberman Shepherd waxay isku dhex jirtaa qiyaastii 2 sano jir— 'Ella waa eey aad u deggan. Waxay jeceshahay inay wax la cunto oo la ciyaarto milkiilaheeda.
Zephyr the Doberman Shepherd mix wuxuu u ekaaday sida eey dhalinyaro ah oo barafka xiran isagoo xiran jaakadeeda casaanka— 'Zephyr waa eey wehel u ah Blitzen, a Isku darka Vizsla / Weimaraner . Markii eeygii hore uu dhintey, waxaan u dooneynay saaxiib Vizmaraner. Zephyr hooyadiis waxay ahayd Doberman Pinshcer aabeheedna wuxuu ahaa AKC German Shepherd. Waxay ku fiicneyd barashada iyo dhageysiga amarrada, in kasta oo ay xoogaa caqabad ku ahayd mararka qaarkood. Waxay had iyo jeer dooneysaa inay hesho shaqo iyo wax ay qabato. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto 'walaalkeed' Blitzen, waxayna jeclaataa gabadheena. Waxay waliba u dulqaadataa bisadaha , laakiin uma muuqato inay danaynayso dhinac uun ama dhinaca kale. Iyadu waa xaraashay , laakiin haddii kale aan la beddelin. Waxay leedahay dabadeeda oo dhagaha oo keligeed ayaa loo daayay. '
Zephyr the Doberman Shepherd mix wuxuu u egyahay eey dhalinyaro ah
Zephyr Doberman Shepherd isku dhafka ah eey ahaan
'Tani waa Qaahira. Magaciisu waxaa loola jeedaa Qaahira, Masar maxaa yeelay wuxuu umuuqdaa nin-bar-dameer-ka muuqaalada Masaarida dhagaha waaweyn. Qaahira waxay ahayd DNA ayaa la baaray si loo xaqiijiyo isirkiisa (yaashiisa). Waxaa la xaqiijiyay inuu yahay Doberman Pincher Heerka # 2 iyo Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka Heerka # 2. Marka natiijada ka soo baxda waa aamin in la yiraahdo labadiisa waalidba waxay ahaayeen kuwo saafi ah. MAYA noocyo kale lama oga. Wuxuu ahaa eey badbaadin ah, laakiin ku saleysan muuqaalkiisa uma muuqdo inuu shil galay. Markii aan ka soo badbaadiyay wuxuu ahaa 76 rodol. waxayna ku qiyaaseen inuu jiray 9-11 bilood. Wuxuu leeyahay astaamo iyo astaamo badan oo tilmaamaya nooca Doberman (midabaynta, jaakadda iyo cagaha) iyo kuwa kale ee iska amaahiya Adhijirka Jarmalka (dabada, dhegaha iyo sirdoonka). Miisaankiisu woxoogaa woqooyi ayuu ka yahay 150 rodol. !!! Isagu waa eey aad u dabacsan laakiin ilaalin leh shakhsiyad la yaab leh oo jacayl leh. Wuxuu jecel yahay garkiisa weyn ee duugmay !!!! Ninkani aad buu u dheer yahay wuuna leefleefi karaa tirooyinka isaga oo aan lugaha dambe ka kicin oo wuxuu si fudud u eegi karaa xayndaabka 6-foot ah
Sawirada Shepherd Doberman 1
pitbull eey 3 bilood jir ah
xadka Pit isku darka SUNTZU shih
eeyaha la jaanqaada eeyaha kale
weimaraner iyo isku dhafka deenish weyn